Yakavanzika Policy - 802Quits
Ndinokutendai nekushanyira 802Quits.org uye kuongorora kwedu zvakavanzika mutemo. Ruzivo rwatinogashira runobva pane zvaunoita iwe paunoshanyira saiti yedu. Icho chirevo chebumbiro redu rekuvanzika chiri nyore uye chakajeka: hatizotora chero ruzivo rwewe pachako kana iwe ukashanyira webhusaiti yedu kunze kwekunge iwe uchisarudza nekuzvidira kupa iyo ruzivo kwatiri, semuenzaniso, nekupinza ruzivo nenzira yekuzvidira online fomu kana kutumira isu email.
Aya ndiwo maitiro atinoita ruzivo nezve kushanya kwako kuwebsite yedu:
Kana iwe usina chaunoita panguva yekushanya kwako asi uchitarisa pawebhusaiti, verenga mapeji, kana kurodha pasi ruzivo, isu tichaunganidza nekuchengetedza rumwe ruzivo nezve kushanya kwako otomatiki Yako webhu bhurawuza software inotumira mazhinji eruzivo urwu kwatiri. Aya ruzivo haakuratidze iwe pachako.
Isu tinongotora uye tinochengeta chete inotevera ruzivo nezve kushanya kwako:
Iyo nhamba yeIP kero (iyo IP kero inhamba iyo inozotumirwa ku komputa yako pese paunenge uchitsvaga paWebhu) kubva kwaunowana iwe webhusaiti ye802Quits.org. Yedu software inokwanisa ipapo mepu aya IP mazita mumazita eInternet domain, semuenzaniso, "xcompany.com" kana ukashandisa yakavanzika Internet account account, kana "yourschool.edu" kana iwe ukabatana uchibva kuyunivhesiti domain.
Rudzi rwebrowser uye inoshanda sisitimu inoshandiswa kuwana 802Quits.org webhusaiti.
Zuva uye nguva yaunowana 802Quits.org.
Iwo mapeji iwe aunoshanyira, kusanganisira magiraidhi akatakurwa kubva kune yega peji uye mamwe magwaro aunotora, senge PDF (Portable Gwaro Fomati) mafaera uye magwaro ekugadzirisa mazwi.
Kana iwe ukabatanidza ku802Quits.org kubva kune imwe webhusaiti, kero yewebhusaiti. Yako Webhu bhurawuza software inotumira ruzivo urwu kwatiri.
Isu tinoshandisa ruzivo urwu kutibatsira kuti saiti yedu ibatsire zvakanyanya kune vashanyi - kudzidza nezve huwandu hwevashanyi vesaiti yedu uye mhando dzetekinoroji vashanyi vedu vanoshandisa. Isu hatiteedzere kana kurekodha ruzivo nezve vanhu uye kushanya kwavo.
Cookie idiki zvinyorwa faira izvo Webhusaiti inogona kuisa pane yako hard drive yekomputa kuitira, semuenzaniso, kuunganidza ruzivo nezve zviitiko zvako pane ino saiti kana kuti zviite kuti iwe ugone kushandisa online yekutengera ngoro kuchengetedza zvinhu zvaunoshuvira kutenga. Iyo cookie inotumira ruzivo urwu kudzokera kune iyo webhusaiti komputa iyo, kazhinji kutaura, ndiyo chete komputa inogona kuiverenga. Vazhinji vatengi havazive kuti makuki ari kuiswa pamakomputa avo pavanoshanyira mawebhusaiti. Kana iwe uchida kuziva kana izvi zvikaitika, kana kuzvidzivirira kuti zvirege kuitika, unogona kuseta bhurawuza rako kukuyambira iwe kana webhusaiti ichiedza kuisa cookie pakombuta yako.
Isu tinoodza moyo kushandiswa kwemawebhu kuki pane edu maPortal. Makeke echinguvana, zvisinei, anogona kushandiswa pazvinenge zvichidikanwa kupedzisa kutengeserana kana kusimudzira ruzivo rwevashandisi hwekushandisa saiti.
Email uye Online Mafomu
Kana iwe ukasarudza kuzviratidza iwe nekutitumira email kana nekushandisa edu epamhepo mafomu - seapo iwe paunokumbira mahara kurega maturusi; tumira email kune maneja wesaiti kana mumwe munhu; kana nekuzadza imwe fomu neruzivo rwako uye nekuzviisa kwatiri kuburikidza newebsite yedu - tinoshandisa ruzivo irworwo kupindura meseji yako uye kutibatsira kuti tikutorere iwe ruzivo rwawakumbira. Isu tinobata maemail nenzira imwecheteyo yatinobata nayo tsamba dzinotumirwa ku802Quits.org.
802Quits.org haina kuunganidza ruzivo rwekutengesa kushambadzira. Hatisi kuzotengesa kana kubvarura ruzivo rwako kuzivikanwa kune chero ani.
Pamusoro peemail, 802Quits.org inogona kukumbira yako ruzivo rwega kuitira kugadzirisa zvikumbiro nemirairo inowanikwa kuburikidza ne802Quits.org. Mienzaniso inosanganisira:
Chikumbiro chemahara kurega maturusi.
Zvese izvi zviitiko ndezvekuzvidira. Iwe uchagara uine sarudzo yekuti uite chikumbiro uye nekupa iyi ruzivo.
Iyo webhusaiti ye802Quits.org ine zvinongedzo kune mamwe mamiririri ehurumende uye zvimwe zveveruzhinji kana zvemubatanidzwa zviwanikwa. Mune zviitiko zvishoma, isu tinobatanidza kumasangano akazvimirira nemvumo yavo. Paunenge iwe uchinge wabatanidza kune imwe saiti, iwe uri pasi peyekuvanzika mirau yenzvimbo nyowani.
Isu tinotora zvakanyanya kukoshesa kuvimbika kweruzivo uye masystem atinochengetedza. Nekudaro, isu takamisa matanho ekuchengetedza ese masisitimu eruzivo ari pasi pedu kuitira kuti ruzivo rwusarasike, rushandiswe zvisirizvo kana kuchinjwa.
Zvekuchengetedza nzvimbo uye kuona kuti yedu yeInternet masevhisi anoramba achiwanikwa kune vese vashandisi, isu tinoshandisa mapurogiramu esoftware kuongorora traffic kuona nzira isina mvumo yekuisa kana kushandura ruzivo kana zvimwe zvinokanganisa. Kana zvikaitika kuti mvumo yekuchengetedzwa kwemutemo ibvumidzwe uye zvichiteerana nechero nzira yepamutemo inodiwa, ruzivo kubva kunzvimbo idzi runogona kushandiswa kubatsira kuziva munhu.
Yevana 'Peji Kuchengetedza uye Kuvanzika
802Quits.org haina kunangidzirwa kuvana vari pasi pemakore gumi nemasere, uye haizive kuunganidza ruzivo kubva kuvana. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve zvakavanzika zvevana kazhinji, ndapota ona Federal Trade Commission's Yevana Pamhepo Yakavanzika Dziviriro Mutemo Webweji peji.
Isu tinovimba vabereki nevadzidzisi vanobatanidzwa mukutsvaga kweInternet kwevana. Zvakanyanya kukosha kuti vabereki vatungamire vana vavo kana vana vakanzi vape ruzivo rwevanhu pamhepo.
802Quits.org haipe kana kutengesa zvigadzirwa kana masevhisi ekutengwa nevana. Chinonyanya kukosha ndechekuti, kana vana vakapa ruzivo kuburikidza newebsite ye802Quits.org, inongoshandiswa kutigonesa kupindura munyori, uye kwete kugadzira nhoroondo dzevana
Tinogona kudzokorora mutemo uyu nguva nenguva. Kana tikaita chero shanduko dzakakosha isu tinokuzivisa iwe nekutumira chiziviso chakakurumbira pamapeji edu. Ichi chirevo chebumbiro uye hachifanirwe kududzirwa sekontrakiti yerudzi rupi zvarwo.
Rumwe Ruzivo Nezve Kutsvaga Kwakachengeteka
Iyo Federal Trade Commission inopa ruzivo rwakakosha nezve kusevha kwakachengeteka.
Vermont Dhipatimendi Rehutano